OnePlus 5 inosimbisa iyo yekuteedzera kopi yeiyo iPhone 7 dhizaini | IPhone nhau
Ini handisati ndaneta nekunzwa zvekare panguva zhinji: «Bah, dhizaini yeiyo iPhone haichandiudze chero chinhu, ivo vakawandisa zvakare kubvira iyo iPhone 6«. Kutaura kuti Apple yakagadzira mukugadzira nharembozha mumakore achangodarika inhema, ndoda kutaura kuti iyo iPhone 6 haisi imwe yemhando dzakaipisisa dzakatangwa nekambani yeCupertino. Nekudaro, chishandiso ichi chinoita kunge chine budiriro ine hutsinye, zvese mukutengesa uye mukutarisana nemakwikwi, uye ndizvo izvo ... kana chimwe chinhu chichiita nei kuchichinja?
Ndo izvo makambani mazhinji anoponesa mazana ezviuru emamiriyoni pamadhora ekufunga anofanirwa kufunga, kunyangwe chiri chokwadi kuti mazhinji acho ndeechiChinese mavambo uye nekutengesa kushoma muEurope neNorth America, izvozvi OnePlus 5 yasvika kuzotiratidza zvakare kuti Apple ichiri chirevo chakajeka mukugadzirwa uye kushandiswa.
Dhizaini yeSamsung Galaxy S8 inoshamisa, zano rekugamuchirwa reXiaomi Mi Mix, asi rakaendeswa kune rakanyanya uye nemhedzisiro mhedzisiro. Zviri pachena kuti mune dhizaini nyaya Samsung yatungamira makore maviri apfuura uye kuti Apple inoramba ichibhejera mukuenderera. Yet… Nei makambani achiramba achiteedzera Apple? Zvinoratidzika sechivimbiso chakajeka chekubudirira.
OnePlus haina kurega kunyadziswa pabasa iri, matte dema chishandiso chakarongedzwa zvakanyatsofanana neiyo iPhone 7. Iyo mbiri kamera mamiriro, iyo mbiri toni kupenya mamiriro, iyo yekumberi kamera, asi mira, ndizvo izvo kunyangwe iyo OnePlus logo inoiswa munzvimbo imwechete uye iine inopenya hue iyo Apple inopa kune yayo yakarumwa apple logo pane iyo iPhone 7. Kana iwe ukaisa nyaya pazvinhu zvese zviri zviviri, zvichave zvakaoma chaizvo kuziva. Muchokwadi, maererano neruzivo rwekutanga, Iyo Yekuwedzera ichave zvakare neyekuverenga minwe kumberi nekuzasi kwechigadzirwa, kunyangwe izvi zviine musoro, uye isu tinogona kutaura kuti yakatogarika.
Haisi yekutanga, uye isu tine chokwadi chekuti haizove yekupedzisira mudziyo, chero yakabva kupi, iyo inosanganisira iyi mhando yekugadzira.
Haisi nguva yekutanga kuti zviitike
Kune zvigadzirwa, zvakawanda, izvo zvisingacheke bvudzi mukuvhura zvigadzirwa izvo zvakada kufanana kune izvo izvo zvakanaka yekare Jony Ive anoshanda pane yake studio (zvakanaka ... hazvina kushata izvo). Muchokwadi, imwe yeakanyanya bronze iPhone 6 matombo ayo atinoziva ane chaizvo kugamuchirwa kwakanaka mumusika, isu tinotanga ne Umi Z, chishandiso icho kumashure kwayo uye padivi chakada kufanana nechokugadzirwa nekambani yeCupertino. Iyi Umi Z yakapoterera mazana matatu uye haina tsananguro dzakaipa, 300GB ye RAM, processor isingasviki gumi MediaTek Helio X4 cores uye 27 inches Full HD, kuwedzera kune muverengi weminwe.
Asi hazvisi zvese zvinodzokera kumaChinese mabhurani asina kukosha kwakanyanya kwenyika, HTC, mucherechedzo parizvino uri kuderera, kwete kureva kuti vanga vafa, akatipa iyo HTC Imwe A9, Zvakanyanya kuoma kusiyanisa kumashure kweiyo iPhone 6, kunze kwekunge kamera yaive negadziriro yepakati, uye nemisiyano yakatarwa maererano ne symmetry. Muchokwadi, zvakakuvadza HTC zvakanyanya kupomedzerwa kutevedzera Apple zvekuti yakazotaura kuti yaive Apple yakavateedzera. Akanaka akura Jony Ive haana kufemerwa musi iwoyo, chii chatingaite ...
Ipapo tine Lenovo, neayo Sisley modhi, iyo Chinese brand yakayedza zvakare, kunyangwe dzimwe nguva kunyangwe kuteedzera kunonetsa mumakambani aya. Izvi hazvina mubvunzo, uye kunyangwe hazvo ndisingazvifarire zvakanyanya, iyo yekusimbisa yegumi nesere yekuti iyo iPhone neApple vanoramba vachiraira dhizaini dhizaini. Zvakaoma kutaura kana Samsung ichipa runako rwechokwadi senge iyo Galaxy S8, asi uchiona izvo zvinouya kumashure, Zvinotaridza kuti makambani anofarira kuenda kubhegi rakachengeteka (dhizaini yaApple) pane hunyanzvi (iyo Galaxy S8).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » OnePlus 5 inosimbisira iyo umpteenth kopi yeiyo iPhone 7 dhizaini
Wakanonoka, inhema. Zano rakanaka rekushambadzira kuitira kuti runhare urwu rwutaurwe nezve mazuva asati aratidzwa zviri pamutemo